အပင်ကြီးထွားလာသည့်အလင်းများ အပင်ကြီးထွားလာသည့်အလင်းများ မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
SHINYU LIGHT CO., LTD. ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ အပင်ကြီးထွားလာသည့်အလင်းများ, အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိတဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းနဲ့အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ပြီးသော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုကြာရှည်ခံမှုနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသေချာစေရန်အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အရည်အသွေးပစ္စည်းသုံးပြီးဒီထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအကောင်းဆုံး efficiency နဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များရှည်လျားနောက်ဆုံးရေရှည်တည်တံ့သောစွမ်းရည်နှင့်အတူဖောက်သည်များစိတ်ကျေနပ်စေကြောင့်လူသိများကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပိုမိုမော်ဒယ်များကျေးဇူးပြုပြီးချင်တယ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ယခု!
ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်များတွင်အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးခြင်း၏အယူအဆအောက်မှာ,LED စက်ရုံအလင်းအိမ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းမွေးဖွားခဲ့ကြသည်,နှင့်စက်ရုံမီးခွက်များ၏စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုပြေဖို့ပိုပိုပြီးသက်ဆိုင်ဖြစ်လာသည်,ဖန်လုံအိမ်အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စားသောက်ဆိုင်များ.စားသောက်ဆိုင်ကဖေးရှိမိုးလုံလေလုံအပင်များသည်အလင်းဖြည့်ရန်အလင်းဖြည့်သည်.....ဒါကြောင့်အမျိုးမျိုးသော applications များပေါ်တွင်!
elastic optical module နှင့်အတူပေါင်းစပ်အထုပ် COB အလင်းအရင်းအမြစ်(illumination ထောင့်:၁၅/56/၉၅/၁၃၂ ဒီဂရီ).
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.ledlightfixtures.org/my/plant-grow-lights.html